ओली सरकार ढल्छ, नयाँ सरकार बन्छ : सुरेन्द्र पाण्डे
काठमाडौं। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले नेकपा फुट्दैमा देश बर्बाद नहुने र यो सरकार ढल्यो भने यसको ठाउँमा अर्को आउने बताएका छन्। एक अनलाईनलाई अन्तरवार्ता दिँदै नेता पाण्डेले तर, पार्टी फुट्यो भने नेकपा चाहिँ सकिने बताएका हुन्।
कार्यकर्ताहरु त पार्टी फुट्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले पार्टी फुट्दैन भन्ने विश्वास व्यक्त गरे। नेता पाण्डेले सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुले मञ्जुरी नदिएपछि पार्टी कसैले फुटाउँन नसक्ने बताए।
उनल भने, ‛यो अवधिमा समाचारहरु आयो-प्रचण्ड र केपी कमरेडबीचमा सल्लाहले पार्टी फुटाऔं कुरा भयो। के भयो भन्ने त थाहा छैन। तर, समाचार त आयो। सल्लाहले पार्टी फुट्ने भन्ने हुन्छ ? दुई जनाको रहरबाजी र लहडबाजी हो यो ?’ उनले नेकपाका अध्यक्ष ओलीलाई बैठकका लागि राजी हुनुपर्ने बताए।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले भने,‛ बैठक नगर्ने मान्छे पार्टीको नेता हुन्छ ? यही पार्टीले नेता बनाएको होइन ? बैठकमा कसैले राजीनामा माग्छ भने आँट गर्नुपर्‍यो नि। म फेस गर्छु भन्नु पर्‍यो नि। अनि त्यो हिम्मत नगर्ने मान्छेले कोठामा बसेर पद जोगिन्छ ? जोगिँदै जोगिँदैन। त्यसका लागि त आउनुप¥यो नि। अनुचित लाग्यो भने हामी पनि तर्क गरौं। यो त ज्यादती भयो भनौंला । वा यो ठीकै हो भनौंला। छलफल त बैठकमा हुन्छ नि।’
केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए। कात्तिक १५ मा बस्ने भनिएको बैठक कोरोनाका कारण एक महिना पर सरेको भन्दै जुनसुकै हालतमा भए पनि अस्ति केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नैपर्ने बताएका थिए। अमेरिका, म्यानमार, कोरिया र छिमेकी बिहारमै निर्वाचन भइरहेको भन्दै पार्टीभित्र देखिएको समस्या हल गर्न बैठकनै बस्नुपर्ने बताए।